Condition · Programming For Beginner
ဒါမှမဟုတ်ခဲ့ရင် ဒါလုပ်မယ် စသည်ဖြင့် အခြေအနေကို စစ်သည့်အရာတွေ အတွက် ကျွန်တော်တို့တွေ if , switch စတဲ့ syntax ကို အသုံးပြုရပါတယ်။ သို့ပေမယ့် Python မှာ switch ကို support မလုပ်ပါဘူး။
အခု ကျွန်တော်တို့ သုည ဆီက ဂဏန်း ၂ ခု ကို လက်ခံမယ်။ ကိန်း ၂ ခု ကို စားမယ်။ ဒုတိယ ကိန်း က သုညဖြစ်နေရင် အသုံးပြုသူကို သုည ထည့်လို့ မရဘူးဆိုရင် error message ပြမယ်။
Pseudo code အရ ဆိုရင်တော့
if secondnum is less than or equal zero
Print "Second number must be greater than zero"
Print firstnum + "divied by " + secondnum
flowchart ကို ကြည့်ရအောင်။
Python ကို အောက်မှာ ကြည့်ရအောင်
firstnum = input("Enter First Number ? : ") secondnum = input("Enter Second Number ? : ") try : firstnum = int(firstnum) secondnum = int(secondnum) if secondnum <=0: print ("Second number must be greater than 0") else: print (firstnum, " divied by ",secondnum) print (firstnum/secondnum) except ValueError: print ("Please enter number only")
အခု code မှာ ဒါမဟုတ်ခဲ့ရင် ဒါလုပ်ဆိုတာပဲ ရှိပါသေးတယ်။ ကျွန်တော်တို့တွေ တစ်ခု ထက် မက condition တွေကို စစ်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒီ အတွက် pseudo code နဲ့ flow chart ကိုတော့ မဆွဲပြတော့ပါဘူး။ အောက်က python code လေးကို တချက်လောက် လေ့လာကြည့်ပါ။
firstnum = input("Enter First Number ? : ") secondnum = input("Enter Second Number (between 1-10) ? : ") try : firstnum = int(firstnum) secondnum = int(secondnum) if secondnum <=0: print ("Second number must be greater than 0") elif secondnum < 1 or secondnum > 10 : print ("Second number must be between 1-10") else: print (firstnum, " divied by ",secondnum) print (firstnum/secondnum) except ValueError: print ("Please enter number only")